Dib u warshadaynta elektarooniga iyo farsamada walxaha iyo sida dib loogu isticmaalo - Ikkaro
Dib-u-warshadaynta elektaroniga iyo farsamada dheryaha
Waxaan u bilaabaynaa qayb hoosaad cusub dib u samaynta dhamaan qalabyada umuuqda kuwa aan faa iido laheyn oo aan kuheysano guryaheena waana iska tuuri doonnaa, ama aaladaha ay asxaabta ama qoysku nasiiyaan.
Waxaan ula jeedaa floppy drives, caruusadaha ilmaha lagu ciyaaro ama kuwa Shiinaha. Qalajiyaha, kuleylka, telefishanka, router, mobilada iyo taleefannada casriga ah, iwm, iwm. Kama war qabno qadarka qashinka aan soo saarayno, iyo wax kasta oo aan khasaarinno ...
Waxaan rabnaa inaan ka jawaabno su'aasha caadiga ah.
Maxaan ku samayn karaa ...?
Maxaan ka faa'iideysan karaa ...?
Waxaan isku dayi doonaa inaan kala fur furno, aan helno qaybaha kala duwan oo aan eegno kuwa aan ka faa'iideysan karno ama dib u isticmaali karno iyo waxa aan.
Waxaan isku dayi doonaa inaan ka dhigno qeybaha qeyb ahaan farsamo iyo elektiroonig.
Waan ku faraxsanahay inaan helno caawimaad ama talo.
Kani waa mid ka mid ah qaybaha aan ugu jeclahay, waxaan noloshayda kusoo qaatay kala qaadista iyo isku dayga inaan siiyo adeeg labaad, saddexaad iyo inbadan. Runtii waxaan aaminsanahay inay lama huraan tahay oo kaliya dayactirka laakiin in dib loo isticmaalo oo dib loo isticmaalo. Waxyaabaha ay tahay inaynu ka warqabno oo ay tahay in lagu beero dhallinta dugsiga, qoyska, laga soo bilaabo markay aad u yaraayeen. Adduun wanaagsan.
Kala goynta saacadda Ikea Lottorp ama Klockis
Waxaa loo yaqaan Löttorp ama Klockis, waxaan u maleynayaa inay badaleen magaca iyo waa saacad, digniin, saacad iyo heerkulbeeg fudud kaasoo uu ku iibiyo Ikea € 4 ama € 5. A 4 mid. Way ku habboon tahay in lagu haysto jikada, qolalka iwm. Waxa ugu fiican ee saacaddan ku saabsan waa adeegsigeeda, aad ayey u fududahay in la kala beddelo hababka ay ku shaqeyneyso, waa inaad saacadda uun isku wareejisaa. Marka, markaad rogto, cabbirada kala duwan ayaa ka muuqan doona shaashadda. Gabdhahaygu markay waalanayaan way waalaan. Wareeg kasta, waa dhawaq iyo iftiin midab kale ka duwan ayaa soo baxa :)
Sida caadiga ah anigu wax uma iibsado si aan u kala fur furo, had iyo jeer waan ka faa'iideystaa wax u taga qashinka ama dib u warshadeynta, laakiin markan waan iska celin kari waayey. Aniga oo gacanta ku haya, waxaan noqday mid aad u xiiso badan. Miyaan awoodi doonaa inaan la isticmaalo shaashadda Arduino? Dareemahee noocee ah ayey u isticmaali doonaan inay ku cabiraan heerkulka iyo inay ogaadaan isbeddelka booska? Ma jiraa khawano xiiso leh oo lagu samayn karo saacadda? Laakiin inteeda badan, waxa aadka ii xiise galiyay waxa weeye waxa hecku yahay buuqan dabacsan ee aad maqasho markii aad ruxayso? Maxay wax gudaha u dabacsan yihiin? Oo ma aha saacad, laakiin dhammaantood.
Dib-u-warshadayn baytariyada la isticmaalay ee ku shaqeeya qoraxda
Baarayaasha ka MIT waxay dejiyeen qaab dib-u-warshadayn batariyada baabuurta ee la isticmaalay una isticmaal si ay u abuuraan baalayaasha cadceedda ku shaqeeya.
Illaa iyo hadda, 90% baytariyada baabuurta ku jirta macdanta `` lead '' ee Mareykanka gudaheeda dib ayaa loo warshadeeya si looga dhigo baytariyo badan, laakiin waxaa imaan doona waqti teknoolojiyaddan lagu beddeli doono noocyo kale oo baytariyada ah iyo haddii aysan mar dambe suurtagal ahayn / danaynayn in dib loo warshadeeyo iyaga waxay noqon karaan kuwo halis ah dhibaatada deegaanka.
Marka MIT waxay heshay xal aad ufiican. Iyadoo la adeegsanayo hanaan fudud oo u oggolaanaya dib-u-warshadaynta iyaga oo u rogaya baararka qoraxda. Tan ugu wanaagsanina waa taarikadaas markay jabaan dib ayaa dib loogu isticmaali karaa sabuuradaha cusub.
Intaas waxaa sii dheer, faa'iidooyinka halkan kuma eka. hawshu way ka yartahay wasakheynta tan hadda loo adeegsado in laga soo saaro macdanta macdanta. Marka waxay umuuqataa wax walba inay qumman yihiin. Xitaa waxtarka taarikadan cusub oo qiyaastii ah 19% ku dhowaad waa isku mid sida ugu badan ee lagu gaaro teknoolojiyada kale. Hadda waxa kaliya ee ka maqan waa shirkad u heellan suuqgeynta.
Kala furfurka dynamo baaskiil
Waan soo kabtay a dynamo duug ah taasi ma shaqeynayso. A dinamo waa a Matoor koronto si loogu beddelo tamarta farsamada koronto toos ah.
Dib u isticmaal koobabka yogurt galaas
Haddii aad tahay mid ka mid ah kuwa ku cunta yogurt dhalo galaas ah, hubaal waxaad u ilaalisay muraayadaha inay sameeyaan wax aan la garan karin aakhirkana waxay ku dambeeyaan qol ama wax aad uga sii daran, qashinka.
Sida dib loogu isticmaalo loona warshadeeyo silica silica
El Silica gel Waxaa loo adeegsadaa inuu yahay wakiilka qalajinta si loo xakameeyo qoyaanka xayndaabka. Isweydaarsigeeda sare wuxuu ka dhigayaa qoyaan qoyaan wanaagsan. Sida aad arki doonto inkasta oo ay jiraan hadal hayn ku saabsan Silica gel, tani maahan jel, laakiin waa adag.
Boorsooyinkan waxaa la helaa markaan iibsano kabo, dhar, iyo waxyaabo kale oo badan. Marar badanna ma garanayno waxa aan ku samaynayno waxayna ku dambeeyaan qashinka.
Geliyaha 'Silica gel' wuxuu ka kooban yahay koloriin koloriin koloriin ah, taas oo, marka falcelinta qoyaanka, ay isu beddelayso buluug illaa casaan. Boorka la soo saaray marka la xirayo sheygan wuxuu sababi karaa cillad la'aan, marka ha burburin ama wixii la mid ah.
Dib-u-warshadaynta Styrofoam ama Styrofoam
El polystyrene la soo saaray (XPS), kaas oo lagu suuq geeyo magaca Stryrofoam, waxay ka kooban tahay 95% polystyrene iyo 5% gaas oo ku xayiran geedi socodka samatabbixinta.
Halabuurka kiimikada ee polystyrene soo baxay waa isku mid tan polystyrene balaariyay. Laakiin habka qaabeynta Styrofoam, waxay siisaa iska caabin kuleyl badan waxayna ka dhigeysaa mid si fiican ugu dulqaadata biyaha.
Haddii aadan aqoon waxa loo yaqaan 'polystyrene', waa fiiq, waa caddaan nolosha oo dhan, iyo styrofoam, waa midka aad u aragto mararka qaarkood mid adag. Waa xumbada aan u aragno inay u adeegsadaan dahaadhka dhismaha guryaha
Dib u isticmaal biyaha mashiinka dharka lagu dhaqdo
Manuel oo ka socda http://comiendo.wordpress.com/category/eco-chismes/ ayaa noo soo diray maqaalkan si dib loogu isticmaalo biyaha ku jira mashiinka dharka lagu dhaqo.
Tan iyo markii aan isticmaalnay kubbadda koleyga in la dhaqo, waxaan u maleyneynaa sida dib loogu isticmaalo biyaha ku jira mashiinka dharka lagu dhaqo inuu waraabiyo beerta Adoo ka faa'iideysanaya xaqiiqda ah inay soo baxdaa kiimikooyin la'aan. Maaddaama mashiinka dharka lagu dhaqo uu ku yaal garaashka, waxaa jiray meel loogu talagalay tijaabooyinka iyo in lagu rakibo nidaam lagu kalsoonaan karo oo madaxbannaan. Waxa kaliya ee lagaa doonayaa waa inaad furaan fure ku xiran inaad saabuun isticmaasho iyo inkale. Waa hagaag waxay u socotaa hal-abuurka, si fiican u daadi. Xilliga jiilaalka waxaan heli doonaa biyo badan laakiin xagaaga waxa soo baxa oo dhami kuma filnaan doonaan.
Shisheeyaha ku dhis cutubyo dib loo warshadeeyay
Ma jeceshahay chess? Moodooyinkaas ayaa lagugu dhiirrigelin karaa ku samee shaashad adiga kuu gaar ah waxyaabo dib loo rogay,
Chess leh boolal iyo lows
gaar ahaan lowska, ilo, maydhashooyin iyo boolal.
Xaaladdan, qaybaha chess ayaa lagu sameeyay qaybaha gaariga.
Sidee dawanka mootada u shaqeysaa
Maanta waxaan furaynaa dheri aan ku xasuusano. ¿Yaan baaskiil sidan ilmo yar oo leh dawan sidan oo kale ah?.
Waxaan u maleynayaa inay intaas tahay farsamo casri ah oo casri ah, ejejej.
Hawlgalkeedu waa mid aad u fudud.